ကျောက်ကပ်ရောဂါကုဌာန | ဘမ်ရွန်ဂရက် ဆေးရုံကြီး
ဓာတ်ဆားဓာတ်များနှင့် အက်ဆစ်-ဘေ့စ်ဓာတ် ပုံမှန်မဟုတ်ခြင်း
မျိုးရိုးဗီဇကြောင့်နှင့် မျိုးရိုးဗီဇကြောင့်မဟုတ်သော ကျောက်ကပ်ရောဂါ (ဥပမာ - ကျောက်ကပ်တွင် အရည်အိပ်များတည်ခြင်း၊ ကျောက်ကပ်လုပ်ဆောင်ချက်ပုံမမှန်ခြင်း၊ အကြားအာရုံနှင့် မျက်စိတို့တွင်ပါထိခိုက်သော ရောဂါစု၊ ကျောက်ကပ်အတွင်းရှိ သွေးကြောငယ်လေးများရောင်ခြင်း၊ နောက်ဆုံးအဆင့် ကျောက်ကပ်ရောဂါ)
သွေးတိုးရောဂါ နှင့် ဆီးချိုရောဂါများကြောင့်ဖြစ်ပွားသည့် ကျောက်ကပ်ပြဿနာများ
*သွေးတိုးနှင့်ဆီးချိုရောဂါသည် ကျောက်ကပ်လုပ်ဆောင်ချက်ကို ယိုယွင်းစေသည့် အဓိကအကြောင်းရင်းဖြစ်ကြောင်း သတိပြုစေလိုပါသည်။ နာတာရှည်ကျောက်ကပ်ရောဂါကို နှေးကွေးစေရန် သွေးတိုးနှင့်ဆီးချိုရောဂါအား ထိန်းချုပ်ရန် လွန်စွာအရေးကြီးပါသည်။ နာတာရှည်ကျောက်ကပ်ရောဂါသည်လည်း သွေးတိုးရောဂါကို ဖြစ်ပွားစေပါသည်။
ဆီးတွင်ပါဝင်သောပစ္စည်းများကို စစ်ဆေးရန် ၂၄ နာရီအတွင်းသွားသောဆီးကို စုဆောင်းခြင်း
ကျောက်ကပ်မှမစွန့်ထုတ်နိုင်သည့် ယူရီးယားဓါတ်မှလာသော သွေးအတွင်းရှိ နိုက်ထရိုဂျင်ပမာဏစစ်ဆေးခြင်း (BUN)
ဓာတ်ဆားဓာတ်များ (ဆိုဒီယမ်၊ ပိုတက်ဆီယမ်၊ ကလိုရိုက်၊ ဂလူးကို့စ်၊ ကယ်လ်ဆီယမ်၊ ဖော့စဖိတ်၊ အယ်လ်ဗျူမင်)
သွေးတွင်းခရီတီနင်းဓာတ်မှစစ်ဆေးသည့် ကျောက်ကပ်စစ်ထုတ်မှုနှုန်းခန့်မှန်းချက် (eGFR) (နာတာရှည် ကျောက်ကပ်ရောဂါနှင့် အခြားကျောက်ကပ်နှင့်ဆက်နွယ်ဖြစ်ပွားသော ပြဿနာများကိုရှာဖွေရန် အသုံးများသောနည်းလမ်း)
ကျောက်ကပ်ပုံရိပ်ရိုက်စစ်ဆေးမှုများ - ကျောက်ကပ်အာလ်ထရာဆောင်း၊ ကျောက်ကပ်သွေးကြော ကျဉ်းခြင်း၊ ပိတ်ခြင်းကိုသိရန် သွေးကြောအာလ်ထရာဆောင်း၊ စီတီစကင်၊ သွေးကြောစစ်ဆေးသည့် အမ်အာအိုင်စကင်။
ဆီးလမ်းကြောင်းပိတ်ဆို့မှုကိုစစ်ဆေးရန် (ဥပမာ - ကျောက်ကပ်တွင် ကျောက်တည်ခြင်း)
ကျောက်ကပ်တွင် အရည်အိတ်တည်သည့်ရောဂါကို စစ်ဆေးရန်
ဆီးထဲတွင် ပရိုတင်းပါဝင်မှုကို တွက်ဆခြင်း (ကျောက်ကပ်ပြဿနာများရှိကြောင်း အဓိကဖော်ပြချက်)
ဆီးတွင်းရှိ ပရိုတင်း/ ခရီတီနင်းအချိုး
ဆီးတွင်းရှိ မိုက်ခရိုအဲလ်ဗျူမင်/ ခရီတီနင်းအချိုး
ဆီးစစ်ဆေးခြင်းနှင့် ဆီးထဲတွင်အနည်ထိုင်သည့်အရာများကိုစစ်ဆေးခြင်း (နာတာရှည် ကျောက်ကပ်ရောဂါကိုသိရှိရန် နှင့် ကျောက်ကပ်ရောဂါအမျိုးအစားကို သတ်မှတ်ခြင်း)
သွေးတွင်းရှိအရာများအား အမျိုးအစားခွဲထုတ်ခြင်း (သွေးရည်ကြည်အားဖယ်ထုတ်ခြင်း၊ သွေးသန့်စင်ခြင်း၊ ရောဂါရှိသော သွေးတွင်းမှပဋိပစ္စည်းများဖယ်ထုတ်ခြင်း)
အာဟာရနှင့်ပတ်သက်၍ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးခြင်း - ကျောက်ကပ်ရောဂါအထူးပြု အာဟာရပညာရှင်ထံမှ ထိန်းချုပ်စားသောက်ရမည့် အစားအစာများနှင့်ပတ်သက်၍ အကြံဉာဏ်။
ပုံမမှန်သော ကျောက်ကပ်လုပ်ဆောင်ချက်အတွက် အစားထိုးဆောင်ရွက်မှုများ
အချိန်တို ကျောက်ကပ်ဆေးခြင်း (အမြင့်ဆုံးရေသန့်စင်စနစ်၊ သွေးသန့်စင်စနစ်)
ဆက်တိုက် ဝမ်းဗိုက်မှတဆင့် သွေးသန့်စင်ခြင်း
ကျောက်ကပ်အစားထိုးခွဲစိတ်ကုသခြင်း (နိုင်ငံခြားသားလူနာများအတွက် အသက်ရှင်လျက်ရှိသော ဆွေမျိုးအရင်းများထံမှ လှူဒါန်းခြင်းကိုသာ လက်ခံပါသည်။)
ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်များသည် ဆေးဝါးအမြောက်အများသောက်သုံးနေရသော ကျောက်ကပ်ဝေဒနာရှင်များအတွက် စောင့်ရှောက်မှုများပေးလျက်ရှိပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်များမှ -
ဆေးဝါးများနှင့်ပတ်သက်သည့် ဗဟုသုတအသိပညာပေးအပ်ခြင်း။ ဥပမာ - ဆေးမည်ကဲ့သို့သောက်သုံးရန်၊ ခန္ဓာကိုယ်နှင့်ဆေး မည်သို့တုံ့ပြန်အကျိုးပြုပုံနှင့် ဆေးဝါးများ၏ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ (ထိုဆိုးကျိုးများကို မည်သို့လျော့နည်းစေခြင်းအပါအဝင်)
လူနာများ ဆေးကိုညွှန်ကြားသည့်အတိုင်း စွဲမြဲစွာသောက်သုံးခြင်သည့်စိတ်ကို ပိုမိုတိုးတက်လာစေရန် ပညာပေးခြင်း။
ဆေးတစ်မျိုးနှင့်တစ်မျိုးအပြန်အလှန်သက်ရောက်မှု၊ ဆေးနှစ်ထပ်ဖြစ်ခြင်း၊ ဓာတ်မတည့်မှု စသည့်ဆေးဝါးများနှင့်ပတ်သက်သည့် ပြဿနာများကို စစ်ဆေးရှာဖွေပြီး မလိုလားအပ်သောဆိုးကျိုးများနည်းစေရန် သင်၏ဆရာဝန်နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း။
ဆရာဝန်တစ်ဦးထက်မကပြနေရသော သို့မဟုတ် ရောဂါတစ်ခုထက်မကသော လူနာများအတွက် ဆေးဝါးများကို ပြန်လည်စစ်ဆေးပေးခြင်း။
နာတာရှည်ကျောက်ကပ်ရောဂါအစီအစဉ် - အဓိကရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်သော နာတာရှည်ကျောက်ကပ်ရောဂါကာကွယ်ရန် သို့မဟုတ် ရောဂါရင့်လာမှုကိုနှေးစေရန်နှင့် နောက်ဆက်တွဲ ပြဿနာများမှကာကွယ်ရန် ကျောက်ကပ်အထူးကုများသည် လူနာပြုစုစောင့်ရှောက်သည့်အဖွဲ့နှင့်တွဲ၍ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်မှုနှင့် ပညာပေးခြင်းများ လုပ်ဆောင်ပါသည်။
ကျောက်ကပ်ခွဲစိတ်အစားထိုးကုသခြင်းအစီအစဉ် - ကျွန်ုပ်တို့၏ ကျောက်ကပ်အစားထိုးခြင်းအစီအစဉ်သည် ဆေးပညာနှင့်ခွဲစိတ်ကုဌာနများ၊ အတွင်းလူနာဝန်ဆောင်မှုများနှင့် ပေါင်းစည်းထားသော ဘက်စုံအစီအစဉ် ဖြစ်ပါသည်။ (နိုင်ငံခြားသားလူနာများအတွက် ခွဲစိတ်အစားထိုးခြင်းတွင် အတိအကျလိုက်နာ ရမည့် ဥပဒေကန့်သက်ချက်များရှိသည်ကို မှတ်သားစေလိုပါသည်။ ထိုကန့်သက်ချက်များကိုသိရှိရန် ရက်ချိန်းမယူမီ ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့ထံစုံစမ်းမေးမြန်းပါ။)
အာဟာရနှင့်ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ခြင်း - နာတာရှည်ကျောက်ကပ်ဝေဒနာရှင်များအတွက် ပညာပေးအစီအစဉ်တွင် ၎င်းနာတာရှည်ကျောက်ကပ်ရောဂါ၏ နောက်ဆက်တွဲပြဿနာများဖြစ်ပွားခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် အသားဓာတ်၊ ဆား၊ ဖော့စ်ဖောရပ်စ်နှင့် ပိုတက်စီယမ်ဓာတ် စသည်တို့ ကန့်သတ်စားသုံးရန် လိုအပ်နိုင်ကြောင်း ပါဝင်ပါမည်။
သီးသန့်စမ်းသပ်ခန်း ၈ ခန်း
ပညာပေးပစ္စည်းများ (စာစောင်များ၊ ရုပ်ပြပုံများ၊ ဗွီဒီယို)
Assist.Prof.Dr. Napisvadee Wongchavanich
Assist.Prof.Dr. Sauwaluck Chusil
Prof.Dr. Kriang Tungsanga
Tel. +66 (0) 2011 3992
Tel. +66 (0) 2011 3987
Tel. +66 (0) 2011 3988
Tel. +9595105105 @မြန်မာပြည်ရှိ ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်စားလှယ်ရုံးသို့ ခေါ်ဆိုရန်။
Nephrology (Kidney) Center : Bumrungrad International Clinic (BIC) Building, 19th floor
Rating score 9.16 of 10, based on 45 vote(s)